Fisamboran’i Vietnam mpisolovava sady mpanoratra malaza iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 4:08 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, Français, English
(lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 19 jona 2009)
Nosamborin'ny polisin'ny minisiteran'ny filaminam-pirenena ao Vietnam tao an-tanànan'i Ho Chi Minh tamin'ny faran'ny herinandro noho ny fandraisany anjara tamin'ny asa fanakorontanana i Le Cong Dinh. Io Dinh io dia mpisolovava iray malaza amin'ny fanohanana ny demaokrasia, fiarovana ny zon'olombelona ary amin'ny asa soratra. Vondrona famoaham-baovao sy mpampianatra ambony ao an-toerana maro no nanameloka ny fisamborana an'i Dinh.
Ampangaina amin'ny fanitsakitsahana ny andininy faha-88 amin'ny fehezan-dalana vietnamiana iadiana amin'ny heloka bevava izay mandrara ny propangandy amelezana ny Fitondrana i Dinh. Iampangana an'i Dinh ny “firaisana tsikombakomba amin'ireo mpanohariana avy ao an-toerana sy avy any ivelany isomparana ny fanjakana vietnamiana.” Raha meloka amin'izany i Dinh dia mety higadra 3 ka hatramin'ny 20 taona arakaraka ny halalin'ny heloka.
Fa iza moa i Le Cong Dinh? Indro ny soritsoritra ahafantarana ity mpanandra-teny amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ity:
(Dinh), izay manana ny diplaoman'ny lalàna avy ao amin'ny oniversiten'i Tulane, Etazonia, dia akaikin'ireo mpisintaka ara-kevitra maro ao anatin'ny hetsika mpanohana ny demaokrasia niforona tamin'ny taona 2006, fantatra amin'ny anarana Bloc 8406. Izy no mpisolovavan'ny fiarovana tamin'ny fitsarana ireo mpisolovavan'ny zon'olombelona Nguyen Van Dai sy Le Thi Cong Nhan tamin'ny volana mey 2007, izay nanamelohana ny voampanga higadra noho ny “fampielezana hevitra manimba ny Fanjakana”.
Notsikerain'i Amnesty International ny ny governemanta vietnamiana ho manampina ny fahalalaham-pitenenana:
Ny fisamborana dia marika vaovao amin'ny fahavononan'i Vietnam hanampina ny fahalalaham-pitenenana, sy hampangina izay rehetra mitsikera ny governemanta na mamoaka hevitra hafa ankoatra ny an-dry zareo.
Amnesty International fa farafahakeliny 30 ny mpisintaka ara-kevitra nodidiana higadra fotoana maharitra hatramin'ny taona 2006 noho ny fandraisany anjara amin'ny hetsika pro-demaokrasia sy fiarovana ny zon'olombelona.
Southeast Asian Press Alliance nanadihady ny fidiran'ny politika amin'ny fisamborana an'i Dinh :
Raha jerena amin'ny laza sy ny traikefany amin'ny fiarovana ny mpanoratra sy mpanandratenin'ny zon'olombelona sy ny demaokrasia azy ao Vietnam, dia fanafihana indray mipoaka miantefa amin'ny sehatra roa iankinan'ny ain-dehiben'ny fanavaozana demaokratika na amin'ny fiarahamonina ny fisamborana an'Atoa Dinh. Mandefa hafatra masiaka izy tsy amin'ireo mpanoratra sy olompirenena manandra-teny am-pilaminana ho amin'ny fiovana ihany, fa ho an'ireo fiarahamonina ara-pitsarana izay te-hiaro ny vahoaka vietnamiana amin'ny zony hiteny malalaka.
Nolazaina fa niaiky heloka tamin'ny manampahefana tamin'ny fandraisana anjara tamin'ireo hetsika manitsakitsaka ny lalàna vietnamiana i Dinh. Nolazaina fa nangataka ny famindrampon'ny fanjakana izy, araka ny nolazain'ilay mpitati-baovao ihany.
Misy ny fanangona-tsonia an-tserasera mandrisika an'i Vietnam hamotsotra avy hatrany an'i Dinh “satria fanapoahana ny demaokrasia sy ny zon'olombelona ny fisamborana azy.” Mandrisika ny rehetra ihany koa ny fanentanana hanoratra sy handefa taratasy amin'ny masoivoho Vietnamiana manerana izao tontolo izao ho fanohanana an'i Dinh.
Natsangana ihany koa ny bilaogy Free Le Cong Dinh [Avotsory i Le Cong Dinh] mba hanome ny vaovao farany indrindra momba ny raharaha Dinh.